Ity ny fomba tsy handoroana anao amin'ny Marketing Influencer | Martech Zone
Efa nanoratra momba ny velam-barotra amin'ny fandrika. Amin'ny maha olona onitra azy indraindray hery miasa mangina, Tsy mino aho hoe firy ny fitaomana ny fifandraisana amin'ny marketing no apetraka.
Raha ny zava-misy, tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nasaina nankany amin'ny Biriky ny biriky satria eo an-toerana aho hery miasa mangina amin'ny media sosialy. Nisy andian'olona marobe nasaina avy amin'ny media sosialy - samy manana isa marobe amin'ny motera fitarihana fitaomana malaza avokoa izy rehetra Indianapolis. Ny làlana dia nanome pasipa fijanonana sy tapakilan-tsolika ary nivoaka niaraka tamin'ny hetsika. Tsy nandeha aho - nifanandrina tamin'ny ora farany aho.
Nandeha tokoa ny iray tamin'ireo namako ary nivazivazy izy fa tamin'ny fotoana iray, mpamily malaza iray no nandalo teo amin'izy ireo ary tsy nisy nahatsapa akory izany… tsy maintsy nanontany izy hoe iza izy alohan'ny nanipazany sary vitsivitsy tao amin'ny media sosialy. Faona re! Tsy hita tamin'ny varingarin'i rehetra ny fampielezan-kevitra (azafady?) Ary tena nanandrana nifandray tamin'ny làlana aho tamin'ny fotoana nanasana ahy hahazoana antoka fa tsy nandany ny volany izy ireo. Tsy nisy niantso ahy niverina intsony. Izaho dia tao amina hetsika iray izay nangatahiko fotoana fohy tamin'ny olona manan-danja izay manampy amin'ny fampiroboroboana ny làlana… noroahiny koa aho.
Misy singa 3 manokana mahomby paikady marketing influencer ary tsy nahitana azy rehetra ity fampielezan-kevitra ity:
Moa ve ny mpihaino ny lalao influencer ny mpihaino tadiavinao hotratrarina? Ny làlana dia mety ho tsara lavitra noho ny fanasana olona manana mpanaraka 100 liana amin'ny hazakazaka toy izay miaraka amiko izay manana mpanaraka 30k izay tsy fantatro raha misy miraharaha ny hazakazaka satria tsy miresaka momba ny hazakazaka mihitsy aho.
Nisy ve a tantara hozaraina amin'ny influencer miaraka amin'ny mpihaino azy ireo izay hanako? Tsy tantara ny miseho, misakafo sakafo maimaim-poana, misotro labiera, ary mandeha mankeny an-dàlam-pandrosoana. Mety ho hafahafa ny hiresaka momba ny fifandraisan'ny fianakaviana, ny tantara, ny mpamily, ny haitao… na inona na inona afa-tsy ny sary labiera.
Nisy ve a fiantsoana fepetra handrefesana ny fiantraikany amin'ny fampielezan-kevitra? Eny ary, mety nisy fiakaran'ny feo tamin'io andro io satria niresaka momba ny Brickyard ireo mpikomy sosialy rehetra ireo. Haha! Mivazivazy tanteraka aho - TSY MISY tsimok'aretina satria efa an'arivony maro ny mpankafy miresaka momba ny hazakazaka! Tsy nanova na inona na inona ireo nitaona ireo.
Raha ny hitarika ny olona avy any ivelan'ny mpankafy mahazatra mankany amin'ny làlana no tanjona dia tsy nanampy izany. Tsy naheno tantara iray izay nahasarika aho…. raha ny marina dia nandre tantara TSY teo ivelan'ny sakaizako izay nihomehy hahazo tapakila maimaimpoana aho. Ireo tantara nilaina nilaina dia tokony nifanaraka paikady mifandraika amin'ny fanapahan-kevitray hividy.
Betsaka kokoa no azo natao mba hampamoahana ireo olona nitsidika azy ireo. Angamba bokikely iray amin'ny fanaovana ny kaonferansa sosialiny manaraka eo amin'ny làlana, angamba kaody fihenam-bidy hizara amin'ny olona momba ilay làlana, angamba ny lisitry ny bitsika, ny fanavaozana ary ny sary ops izay natambatra mba hifaneraserana amin'ireo mpampiasa momba ireo tantara momba ny antony tokony handehanany mankamin'ny làlana, inona ny hetsika manaraka ary aiza no hividianana tapakila.
Raha handoa ianao na hanome zavatra ho an'ny influencers dia alao antoka fa hiasa ho anao izy! Tsy manohitra ny marketing influencer mihitsy aho, tsotra fotsiny fa tsy mora toy ny mitady influencer amin'ny tranokala sasany ary manipy tapakila maimaimpoana ho azy ireo. Mety ho tsara lavitra izany!
Tags: birikylalamby indianaapolishery miasa manginamarketing marketingklouthazakazaka
Fantatrao ve ny tsy fitovizan'ny sonian'ny dizitaly sy ny sonia E?